लक्ष्मी आचार्यको गीतमा राजेश हमालको अभिनय : RajdhaniDaily.com - लक्ष्मी आचार्यको गीतमा राजेश हमालको अभिनय
Home कला लक्ष्मी आचार्यको गीतमा राजेश हमालको अभिनय
लक्ष्मी आचार्यको गीतमा राजेश हमालको अभिनय
काठमाडौं । गायिका लक्ष्मी आचार्यको लोक गीत ‘आफ्नै नाम मन परयो’ सार्वजनिक भएको छ । आकर्षक भिडियो साहित सार्वजनिक गीतमा आचार्यलाई कुलेन्द्र बिश्वकर्माले स्वरमा साथ दिएका छन् ।
माया प्रेमका शब्दले भरिएको निकै मिठास पुर्ण गीतमा प्रलाद सुवेदीको शब्द तथा बसन्त थापाको संगीत रहेको छ । गीतको भिडियो पनि फिल्म शैलीमै तामझामका साथ तयार गरिएको छ । भिडियोमा अभिनेता राजेश हमाल, अभिनेत्री नीता ढंगानाको साथमा गायिका लक्ष्मीको समेत अभिनय देख्न सकिन्छ । थुप्रै कोरस समेत प्रयोग गरिएको भिडियो गीतलाई सिगार्न सफल देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नवौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलमा १८ चलचित्र
केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको प्रदेश मन्त्री साहको आरोप
सप्तरी, राजविराज । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले विश्वमा संघियता भएका मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत स्वायत छोडेको भएपनि नेपालमा अझैं...
एजेन्सी - July 29, 2020
लन्डन । वेस्ट इन्डिजविरुद्धको तीन टेस्टको सिरिज इंग्ल्यान्डले आफ्नो पक्षमा पारेको छ । तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले २ सय ६९ रनको...
पत्नी हत्यारा सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने सर्वाेच्चको आदेश किन विवादमा पर्यो ?
Breaking News निराजन पौडेल - July 24, 2020
काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा साढे ८ वर्ष जेल सजाय काटेर बिहीबार रिहा भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने सर्वोच्च अदालतको...
कक्षा १२ परिक्षा : समय डेढ घण्टा (फोटोफिचर)
प्रदेश सत्यन श्रेष्ठ - November 24, 2020
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण बैशाखमा रोकिएको १२ कक्षाको परिक्षा सोमबारबाट सुरु भएको छ । ४० पूर्णाङ्कको उक्त परिक्षामा विद्यार्थीलाई उत्तर पुस्तिका लेख्नका लागि...
पूर्वी नवलपरासीमा संक्रमितको संख्या १ सय १६ पुग्यो, शनिबार १७ जना थपिए
प्रदेश ४ शोभा जिसी - June 20, 2020
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीमा शनिबार थप १७ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएसँगै नवलपुरमा संक्रमितको संख्या १ सय १६ जना पुगेको छ । १ सय...
आज असार १५ अर्थात् दही चिउरा र धान दिवस
Editor-Picks नवीन लुइटेल - June 29, 2020
ललितपुर । ‘मजाले हिलोमा छुपुछुपु खेल्दै र धान रोप्दै अनि दही चिउरा खादै हामी असार १५ मा रमाइलो गथ्यौं’, गोदावरी नगरपालिका बडिखेलकी ७१ वर्षीय...
बिचार राजधानी समाचारदाता - April 5, 2020
काठमाडौं । चीनमा कोरोना संक्रमण ‘केभिड १९’ बाट सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु सुरु हुँदा सम्म आम नेपालीमा खास चिन्ता...
Breaking News एजेन्सी - April 9, 2020
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन साता लामो लकडाउन बढाउने बताएका छन् । उनले विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री र न्यायिक अधिकारीहरुसँगको कुराकानीपछि...